iPhone အသစ်များဟာ အဟောင်းနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ Troll လိုက်တဲ့ Huawei – Myanmar Mobile App
Apple ရဲ့ iPhone Event ပြီးတာနဲ့ ဟွာဝေးက လှောင်ပြောင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ Huawei က တွစ်တာ အကောင့်မှာ “Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 “ လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ iPhone အသစ်များဟာ အဟောင်းနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ Troll လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ Mate 20 Series များကို ကြေညာမယ်လို့လည်း ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ ပို့စ်မှာ ဗီဒီယို တစ်ခုလည်း ထည့်သွင်းထားပြီး ဗီဒီယိုမှာ “beyond consistency”, “beyond horizon”, “beyond intelligence” လို့ ရေးသားထားတာက Mate 20 Series များကို ရည်ညွှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mate 20 ဟာ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး 7nm Chipset ဖြစ်တဲ့ Kirin 980 ပါမယ့် ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်လာမှာပါ။ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းများအရ Mate 20 မှာ ၆.၃ လက်မ AMOLED Screen ထည့်သွင်းထားပြီး တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် Notch ပါလာမှာပါ။ အနောက် ကင်မရာ သုံးလုံး ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ P20 Pro မှာလို 40MP+20MP+8MP Setup ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 4200mAh Battery ပါလာမှာပါ။ ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ် ထည့်သွင်းထားမှာပါ။ အရှေ့နဲ့ အနောက်ကို ဖန်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားမှာပါ။
Mate 20 Lite ကိုတော့ မကြာခင်က အွန်လိုင်း စတိုးမှာ စာရင်းတင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဂျာမနီ ၀က်ဆိုက်မှာတော့ ယူရို ၄၃၅ သတ်မှတ်ထားပြီး ပို့ဆောင်မယ့် နေ့နဲ့ ဓါတ်ပုံကို မပြသထားပါဘူး။ ပိုလန် ၀က်ဆိုက်မှာ ယူရို ၃၇၀ သတ်မှတ်ထားပြီး စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပိုလန် ၀က်ဆိုက်မှာ အပြာနဲ့ အနက်ရောင်များကို ပြသထားပါတယ်။
iPhone အသဈမြားဟာ အဟောငျးနဲ့ သိပျမကှာဘူးလို့ Troll လိုကျတဲ့ Huawei
Apple ရဲ့ iPhone Event ပွီးတာနဲ့ ဟှာဝေးက လှောငျပွောငျတိုကျခိုကျလိုကျပါတယျ။ Huawei က တှဈတာ အကောငျ့မှာ “Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 “ လို့ ရေးသားထားပါတယျ။ iPhone အသဈမြားဟာ အဟောငျးနဲ့ သိပျမကှာဘူးလို့ Troll လိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ လနျဒနျမှာ အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ Mate 20 Series မြားကို ကွညောမယျလို့လညျး ရညျညှနျးထားပါတယျ။ ပို့ဈမှာ ဗီဒီယို တဈခုလညျး ထညျ့သှငျးထားပွီး ဗီဒီယိုမှာ “beyond consistency”, “beyond horizon”, “beyond intelligence” လို့ ရေးသားထားတာက Mate 20 Series မြားကို ရညျညှနျးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Mate 20 ဟာ ကမ်ဘာ့ ပထမဆုံး 7nm Chipset ဖွဈတဲ့ Kirin 980 ပါမယျ့ ပထမဆုံး စမတျဖုနျး ဖွဈလာမှာပါ။ ပေါကျကွားထှကျပျေါနတေဲ့ သတငျးမြားအရ Mate 20 မှာ ၆.၃ လကျမ AMOLED Screen ထညျ့သှငျးထားပွီး တွိဂံပုံသဏ်ဍာနျ Notch ပါလာမှာပါ။ အနောကျ ကငျမရာ သုံးလုံး ထညျ့သှငျးထားနိုငျပါတယျ။ P20 Pro မှာလို 40MP+20MP+8MP Setup ဖွဈနိုငျပါတယျ။ 4200mAh Battery ပါလာမှာပါ။ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈ ထညျ့သှငျးထားမှာပါ။ အရှနေဲ့ အနောကျကို ဖနျဖွငျ့ ဖုံးအုပျထားမှာပါ။
Mate 20 Lite ကိုတော့ မကွာခငျက အှနျလိုငျး စတိုးမှာ စာရငျးတငျထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဂြာမနီ ဝကျဆိုကျမှာတော့ ယူရို ၄၃၅ သတျမှတျထားပွီး ပို့ဆောငျမယျ့ နနေဲ့ ဓါတျပုံကို မပွသထားပါဘူး။ ပိုလနျ ဝကျဆိုကျမှာ ယူရို ၃၇၀ သတျမှတျထားပွီး စကျတငျဘာလ ၉ ရကျနမှေ့ာ ပို့ဆောငျပေးမယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ပိုလနျ ဝကျဆိုကျမှာ အပွာနဲ့ အနကျရောငျမြားကို ပွသထားပါတယျ။
Posted on September 16, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version iPhone XS နဲ့ XS Max တွေမှာ dual SIM လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လာပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ကတော့ special edition အဖြစ်နဲ့ physical sim နှစ်ခုထည့်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပကလူတွေကတော့ eSIM ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ eSIM က အားသာချက်တွေများတယ်ဆိုသော်ငြားလည်း အဲဒီနည်းပညာကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထား နည်းနေပါသေးတယ်။ အခုအချိန်မှာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ သြစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ခရိုအေးရှား၊ Czech Republic ၊ ဂျာမနီ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိန္ဒိယ၊ စပိန်၊ ယူကေနဲ့ ယူအက်စ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာရှိတဲ့ Sprint နဲ့ လုပ်ငန်းသေးသေးလေးတွေကလည်း မထောက်ပံ့နိုင်ကြသေးပါဘူး။ ဒီတော့ T-Mobile, Verizon, or AT&T […]